International Hotel Mashaariicda - Hotel Armati Project In Asia
International Hotel Mashaariicda /
Hotel Armati Project In Asia
Tuesday, February 2, 2016 9: 19: 31 AM America / Los_Angeles
Mid ka mid ah Armati 5 bilaabaan mashruuca hotel ee Thailand, Asia, soo dhaweynayaa in ay booqo hotel this si ay u arkaan our qasabada.
Armati 541 catalouge qasabada taxane fadlan hubi soo socda:
Ku soo dhawow Royal orchid Sheraton Hotel & Towers, ah xarrago leh hotel 5-star oo ku yaalla caasimada Thailand ee Bangkok. Ku taal enchanting Chao Phraya River, dhammaan qolalka martida 726 naga soo bandhigto views webiga xanibin.
Royal orchid Sheraton Hotel & Towers sidoo kale bixisaa 28,000 cagaha square ee shirarka iyo shir-hiilaadka, iyo sidoo kale goobaha dhacdooyinka iminka oo aan la ilaawi karin iyo aroosyada. Diin qoyska ama saaxiibbada ka mid offour makhaayadaha, ama qabsado shuttleboat ku amaan u tareen samada Bangkok ee in la ogaado more of goobta cuntada firfircoon ee magaalada. Laba barkadaha dabbaasha miciinka-style, HBS ku haboon, maxkamadda tennis, oo beero beerta meditative xaqse loo Waxyoodo ahayn in aad dareento in aad fiican iyo in la hubiyo joogtid ah la ilaawi karin at our 5-star hotel webi Bangkok.